Yahuudda oo weli duqeyn ka wada GAZA iyo XAMAS oo ku jawaabeysa gantaalo - Caasimada Online
Home Dunida Yahuudda oo weli duqeyn ka wada GAZA iyo XAMAS oo ku jawaabeysa...
Yahuudda oo weli duqeyn ka wada GAZA iyo XAMAS oo ku jawaabeysa gantaalo
Gaza (Caasimada Online) – Ciidamada Israel ayaa lasoo dhoobay xuduudda Gaza, xilli ay weli duqeyn ku socoto magaalada, halka ururka Xamas ay ayagana gantaallo ku garaacayaan Israel, ayada oo xaaladda ay kasii dareyso.
Duqeymo cusub oo ay maanta ka fuliyeen Gaza, ayaa ciidamada Israel waxay ku garaaceen dhisme ka kooban lix dabaq oo ay sheegeen inay leeyihiin Xamas oo maamusha magaalada.
Ugu yaraan 83 qof ayaa lagu dilay Gaza tan iyo markii ay billowdeen duqeymaha Israel Isniintii, sida ay sheegeen kooxaha caafimaadka, ayada oo isbitaallada oo markii horeba la tiicayey bukaanada COVID-19 la geeyey dhaawacyo.
“Waxaan wajaheynaa Israel iyo COVID-19. Waxaan dhexda uga jirnaa laba cadow,” waxaa sidaas yiri Asad Karam oo ah 20 jir ka shaqeeya dhismooyinka, isaga oo dhinaca taagan waddo ay waxyeeleeyeen duqeymaya Israel.
Dhinaca kale, weeraradii ugu dambeeyey ee gantaallo ee Xamas, ayaa mid ka mid ah wuxuu ku dhacay dhisme ganacsi oo ku yaalla caasimadda Tel Aviv, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen shan Israa’iiliyiin ah, sida ay sheegeen booliska.
Toddoba qof ayaa ku geeriyootay Israel tan iyo markii ay billowdeen gantaallada Xamas, sida ay sheegeen militariga Israel.
“Israel oo dhan waxaa ku socda weerar. Waxaa xaalad aad cabsi u leh in lagu sugnaado,” waxaa sidaas yiri Margo Aronovic oo ah 26 jir arday ah oo ku sugan Tel Aviv.
Israel ayaa ciidamo dagaal ku diyaarisay xuduudda Gaza, waxayna ku sugan tahay “marxalado kala duwan oo ay isugu diyaarineyso howlgal dhulka ah,” sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga.